प्रधानमन्त्रीको उल्टो बुझाइ- विचार - कान्तिपुर समाचार
प्रधानमन्त्रीको उल्टो बुझाइ
जनस्तरबाट भए–गरिएका अलोचना सच्चिनका लागि गरिएका खबरदारी हुन् । रिसरागवश गरिएका होइनन् । लोकतन्त्र शासकहरूबाटै बदनाम नहोस् भनेर गरिएका आग्रह हुन् ।
पुस २७, २०७५ श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम
काठमाडौँ — गए आइतबार प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि हमला भइरहेको बताए । तर उनले जुन र जस्ता कारण प्रस्तुत गर्दै लोकतन्त्रमाथि हमला भइरहेको बताए, उनको बुझाइ ठ्याक्कै उल्टो थियो । ती लोकतन्त्रका अविभाज्य गुण हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले नै लोकतन्त्रलाई उल्टो बुझेको सुन्दा धेरैलाई औडाहा भयो र उदेकलाग्नु स्वाभाविक हो । उदेक किन लाग्यो भने नबोल्ने अर्थात् आलंकारिक राष्ट्रपतिको सार्वजनिक आलोचना तथा मन्त्री र सांसदले राज्यप्रदत्त सुविधाको दुरुपयोग गरिरहेकोमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणी हुनु लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि हमला हो भन्ने उनको ठहर थियो ।
नागरिक चनाखा हुनु, उनीहरूले राज्यमा शासकहरूबाट भइरहेका क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्नु र पदाधिकारीहरूबाट सम्पदामाथि भइरहेको दुरुपयोगप्रति खबरदारी गर्नु त वास्तवमा लोकतन्त्रका निम्ति सुखद पक्ष हो । त्यो हमला कसरी भयो ?
लोकतन्त्रका प्रणेताहरूले शासनाधिकारीहरूका आलोच्य क्रियाकलापको आलोचना गर्न पाउने प्रत्याभूतिलाई यसको विशिष्ट गुणका रूपमा स्थापित गरेका र आलोचनाबाटै यसमा निखार आउने मानेका थिए । ओली पनि लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा जेलनेल सहेका मानिस हुन् । उनलाई यस विषयको राम्रो जानकारी हुनुपर्ने हो । तर उनले राष्ट्रपति, मन्त्री र सांसदहरूबाट भइरहेको अधिकार अतिक्रमणमाथिको आलोचनालाई हमला भन्नु वास्तवमा उनले लोकतन्त्र के हो, यसको मर्म के हो भनेर नबुझेको प्रमाण हो ।
अर्थात् अन्तरमनमा कम्युनिस्ट प्रभाव जीवन्त रहेका कारण उनलाई यसको मर्म थाहा रहेनछ भन्नुपर्ने भयो । प्रधानमन्त्रीलाई अब थाहा होस्, पद्धतिमाथि नागरिक निगरानी र नियन्त्रण, शासनाधिकारीहरूबाट हुनसक्ने र भइरहेका क्रियाकलापप्रति नागरिक सजग हुनु, राज्यको सम्पत्तिमाथि अनाधिकार रजगजको पोल खुल्नु लोकतन्त्रमाथि हमला होइन, यसको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो ।
नागरिकको निगरानी भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । शासकहरू सच्चिनुपर्छ, सच्चिए रहन्छन् । नसच्चिए फालिन्छन् । अनियमितता र बलमिच्याइँ गर्ने शासकहरू फालिएर नयाँ आउने मार्गप्रशस्त हुन्छ । नागरिकले शासनाधिकारीलाई निगरानी र नियन्त्रणमा राख्ने उपकरण नै खबरदारी हो । अहिले भइरहेको पनि खबरदारी नै हो । लोकतन्त्र सुरक्षित र परिस्कृत हुँदै जाने यसैबाट हो ।
अन्यथा यसलाई छद्मवेशीहरूले वैधानिक आवरणका रूपमा प्रयोग गर्छन् । लुट मच्चाउँछन् र आफैं ठालु पल्टिँदै चोखिन्छन् । लोकतन्त्रका प्रखर अध्येताहरूले सचेत र जागरुक नागरिकहरूले सार्वजनिक पदधारण गर्नेहरूका क्रियाकलाप र गतिविधिको निगरानी नगरे लोकतन्त्र खतरामा पर्नजाने बताएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रलाई ठ्याक्कै उल्टो बुझेका रहेछन् । सार्वजनिक पदधारण गर्नेको आचरणमाथि निगरानी र आलोचना भयो कि खतरामा परिहाल्ने !
सांसदहरू राज्यबाट न्यायसम्मत रूपमा पाउने तलब–भत्ता, सुविधाका अतिरिक्त चोरबाटो अपनाएर घरभाडा असुल्छन् । यो रहस्य खुल्दा लोकतन्त्रमाथि हमला कसरी भयो ? यो लोकतन्त्रमाथि हमला होइन, सुरक्षाका लागि गरिएको खबरदारी हो । यसलाई लोकतन्त्रका नाममा चोरीखाने प्रवृत्ति उदांगिएको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीका २४ मध्ये २३ मन्त्री मन्त्रिपरिषद र मन्त्रालय दुबै ठाउँबाट इन्धन खर्च प्राप्त गर्छन् । यस विषयमा सार्वजनिक बहस हुन्छ, हुनुपर्छ । बहस हुँदा, चर्चा चल्दा लोकतन्त्रमाथि हमला भएको ठान्ने ? अचम्म छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्रीले त यसलाईआफ्ना मन्त्रीहरूमाथि लगाम लगाउन सहयोग पुग्ने सूचना हो भनेर लिनुपर्ने, सूचकको प्रशंसा गर्नुपर्ने, तर झन् अचम्म, उल्टै गाली !
राष्ट्रपतिले आफ्नो यात्रैपिच्छे बाटो ओगटेर त्यसै पनि लोक हैरान छ, त्यसमाथि अब झन् १४ देखि १८ करोडका गाडीहरू ल्याउने भएपछि मान्छे तर्सिंदैनन् ? सत्य हो, आलंकारिक राष्ट्रपतिले कुनै राजकीय निर्णय गर्दैनन्, राष्ट्रपतिका लागि जे गर्छन्, प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको व्यवस्थापन गर्दा लोकका आँखामा नबिझ्नेगरी गर्नु पर्दैन ?
राष्ट्रपतिका यात्रा र भ्रमणका कारण सर्वसाधारणले सास्ती पाइआएको विषय पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवकै पालादेखि आलोचित भइआएको हो । पूर्वराष्ट्रपति रामवरणले पनिठ्याक्कै पूर्वराजाहरूकै हाउभाउ वरण गरेका थिए । उनी आफूलाई नसच्याई पदमुक्त भए । श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि त्यसमा सुधार आउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए ।
तर सर्वसाधारणले सुधार पर्खिंदा–पर्खिंदै उनको पहिलो कार्यकाल बित्यो । दोस्रोमा सुधार त परै सकस अरू बढ्दै गयो । सर्वसामान्यको बुझाइ र भोगाइ के छ भने दोस्रोपटक पनि उनको अवधि थप गरिएपछि नबोल्ने राष्ट्रपतिले राजाका पालाको शानशौकतलाई उछिन्ने तामझाम देखाउन थालिन् । यस्तोमा सरकारले त बरु राष्ट्रपतिको व्यवस्थापन किफायती र सरल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो ।
राष्ट्रपति भवन परिसरसँग टाँसिएको प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र हटाएर त्यहाँ हेलिप्याड बनाउने प्रयोजनले एउटा हेलिकप्टर खरिद गरिसकिएको तथा तालिम केन्द्र हटाउने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको, राष्ट्रपतिको यात्रा प्रयोजनका लागि पहिला ४ र पछि १४ गरी जम्मा करिब १८ करोड रूपैयाँ पर्ने अत्याधुनिक सवारी साधन खरिद गर्न रकम निकासा गरिसकिएको, दसैंमा राष्ट्रपतिबाट टीका थाप्न आउनेमध्ये कतिपयलाई घुँडा टेकाएर टीका लगाइदिएको, विदेश यात्रामा जाँदा र आउँदा घन्टौं आकाशै कब्जा गरेको जस्ता यावत् प्रसंग तीव्र र स्वस्फुर्त रूपमा जनस्तरबाटै आलोचित भएका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री भन्छन्, यी र यस्ता आलोचनाका कारण नबोल्ने राष्ट्रपतिको बदनामी हुनगयो तथा यसबाट गणतन्त्र खतरामा पर्नगयो । ओलीको यो न्यारेटिभ सरासर गलत हो । किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकले राष्ट्रपति पदलाई विष्णुको अवतार होइन, आफू सरहकै मानव मान्छन्, राष्ट्र नै समुच्च झल्किने तर त्यहाँ आफ्नै प्रतिछाया देखिने प्रतिनिधि मान्छन् । अर्थात् उनमा आफ्नै अनुहारको प्रतिविम्ब देख्न चाहन्छन् । हुनु पनि त्यस्तै पर्छ । प्रश्न त उठ्छ नै, नत्र गणतन्त्र आएको के अर्थ ? लोकतन्त्र हुनुको प्रयोजन के ?
यहाँ २०४६ सालमा भूमिगत जीवनबाट जमिनमा देखिएका वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका दिवंगत पति तथा तत्कालीन माले हँुदै एमालेका महासचिव बनेका मदनकुमार भण्डारीको स्मरण सान्दर्भिक हुन्छ । उनले राजाहरूको विलासी जीवनको आलोचना गर्दै त्यो ठाउँमा यदि राष्ट्रपति हुन्थे भने उनी आम जनताबीच रहन्थे, व्यवस्थापन खर्चिलो हुने थिएन, उनी आम नागरिकजस्तै हुन्थे भनेका थिए ।
तर विडम्बना, उनैकी (धर्म) पत्नीका पालामा मदन भण्डारीको सपनाको राष्ट्रपति पदको गरिमा पूर्वराष्ट्रपतिको भन्दा उक्लिनु त परै दिन–प्रतिदिन विलासी राजामहाराजाका शानशौकत बिर्साउनेगरी जनताका आँखामा कसिंगर हुने दिशातर्फ उन्मुख हुनपुगेको छ । अब प्रधानमन्त्री ओली आफैं भनुन्, गणतन्त्रमाथि हमला कोबाट भइरहेको छ ? जनताबाट त होइन । जनताले त आफू सरहकै, आफ्नै मान्छेलाई सर्वोच्च पदमा पुर्‍याएका हुन् । तर पदमा आसिन भइसकेपछि उहिल्यै नारायणहिटीकै चालचलन शीतल निवासमा दोहोरिन्छ भने नागरिक स्तरबाट खबरदारी त हुन्छ नै । यसलाई हमला होइन, सच्चिन दिइएको सुझावका रूपमा लिएर सच्चिनु र सच्याउनुपर्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना भइरहेकोमा प्रधानमन्त्रीका एक प्रिय मन्त्रीले, ‘के राष्ट्रपति साइकलमा हिँंड्नु त ?’ भनेर जवाफ फर्काए । यसबाट सरकार आम मानिसप्रति कस्तो धारणा राख्छ भन्ने मानसिकता परिलक्षित हुन्छ । प्रश्न उठछ, के राष्ट्रपति सर्वसाधारण नेपालीकै प्रतिनिधि होइन ? जान्दा–चिन्दा उनको त आम नेपालीभन्दा भिन्न देखिनुपर्छ भन्ने संस्कार होइन, तर उनमा ‘राजावादी’ अपसंस्कार कहाँबाट आयो ? मिडियामा देखिएका आलोचना त सम्पादित हुन्छन् महोदय, तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूप्रति सडकमा हिँड्ने मानिसका मुखबाट निस्केका गाली सुन्ने हो भने तिनले प्रधानमन्त्रीका उखान–टुक्कालाई मात दिन्छन् ।
कतिपय सम्पन्न र उन्नत मुलुकका शासनाधिकारीहरू साइकल चढ्छन् । सार्वजनिक यातायातका साधनमा सर्वसाधारणसँगै बसेर यात्रा गर्छन् । राज्यको सम्पत्ति राष्ट्र र जनताको भलाइका लागि हो भन्ने ज्ञान र चेतना भएका शासनाधिकारी भएका मुलुकमा सरकारी खर्च सक्दो कटौती गरिन्छ र त्यो रकम शिक्षा र जनस्वास्थ्यमा लगाइन्छ ।
विदेश यात्रामा करोडौं रकम खर्च गर्ने मन्त्रीहरू, सांसदहरूले बरु तिनको अनुकरण गर्नुपर्ने, राजस्व फुर्मासी गरेकोमा आलोचना हुँदा उल्टै गालीगलौज † मन्त्री र सांसदहरूले आफैं दृष्टान्त बन्ने किसिमको किफायती जीवनशैली अपनाए, निश्चय नै आलोचना होइन, प्रशंसा हुन्थ्यो । त्यसै अनुसार राष्ट्रपतिको पनि व्यवस्थापन गर्नु गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्थ्यो ।
निजी शौख र मोजमस्तीमा राज्यको खर्च नगर्ने आफ्नै तलबबाट गर्ने, हेलिकप्टरमा घुम्न मनलागे घुम्ने तर खर्च आफ्नै बचतबाट गर्ने, राज्यको होइन । राष्ट्रपतिले यात्रा गर्दा तामझम र सडक अवरुद्ध नगरी आम मानिसकै बीचबाट हिँड्दा राष्ट्रपति सानी हुँदिनन्, बरु सम्मानित हुन्छिन् । राष्ट्रपतिले हात हल्लाउन मनलागे हल्लाए हुन्छ । तर राजमुद्रामा होइन, आफ्नै परिवार बीचमा रहँदा–बस्दा जसरी नै । यसो गरिए गणतन्त्र सम्मानित र लोकतन्त्र प्रतिष्ठित हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा राज्यको खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा बढाउने, शासकहरूमाथि हुने खर्च घटाउने हो । केही दिनपूर्व एउटा समाचार आएको थियो, कतै चेपाङ बालबालिकालाई विद्यालयमा खाना दिने गरिएको थियो, तर बन्द गरिएपछि उनीहरू स्कुल जान छाडे । राज्यको जिम्मेवारी उनीहरूको भोजनको व्यवस्था गर्ने हो ।
त्यस्तै उपचार खर्च नभएर थलिएका मानिसबारे समाचार आइरहन्छन् । तिनको उपचारमा तत्परता लिने हो । सार्वजनिक सवारी साधनको दुरवस्था भनिसाध्य छैन । राजधानी उपत्यकामै मानिस टेम्पो र माइक्रोमा कोचिएर यात्रा गर्छन् । सर्वसाधारणको यात्रालाई सुविधाजनक र सहज बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । लोकतन्त्रमा राज्यको जिम्मेवारी शासक होइन, जनता प्रथम हो ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले शासनाधिकारीहरूको आलोचना हुँदा लोकतन्त्रमाथि हमला भइरहेको बुझ्नु गलत हो । त्यसरी बुझ्नु हुँदैन । जनस्तरबाट भए गरिएका अलोचना सच्चिनका लागि गरिएका खबरदारी हुन् । रिसरागवश गरिएका होइनन् । लोकतन्त्र शासकहरूबाटै बदनाम नहोस् भनेर गरिएका आग्रह हुन् । सुल्टो यस्तो हो, उल्टो नबुझियोस् ।
प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०८:०३
पृथ्वीनारायण भन्थे, ‘दक्षिणी सेना उत्तर आयो भने पहाडमा ल्याएर मात्र लडाइँ गर्नुपर्छ । चुरे पहाडको घाँटीमा सखाप पार्न सजिलो हुन्छ ।’
पुस २७, २०७५ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
काठमाडौँ — नेपालको दक्षिणतर्फ भारतीय उपमहाद्वीपमा रहेका ५ सय ६५ भन्दा बढी राज्य–रजौटाको भूमिमा सत्रौं शताब्दीदेखि आधिपत्य जमाएर बेलायती इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले शासन गरिरहेको थियो । कम्पनी सरकारको आँखा उत्तरतर्फको बाइसे, चौबिसे तथा सेन राज्यजस्ता सानातिना भुरेटाकुरे हिमाली राज्यप्रति पर्‍यो ।
अंग्रेजको यस्तो कुदृष्टिप्रति सजग भई पृथ्वीनारायण शाहले हिमाली राज्यको सीमा एकीकरण गर्दै सशक्त राज्यको सुदृढ सीमा तयार पार्ने अभियान सुरु गरे ।
हिमवत खण्डमा रहेका राज्यको सीमा सृदृढ र निश्चित नभए अंग्रेजले एक–दुई राज्य गर्दै अङ्ग्रेजी शासनभित्र विलय गराउँछ भन्ने पृथ्वीनारायणले बुझेका थिए । यी हिमाली राज्य हँुदै अंग्रेजलाई तिब्बतसम्म व्यापार गर्न पुग्नु थियो भन्ने पनि उनमा ज्ञान थियो । पृथ्वीनारायणले गोरखा राज्यको सीमामा अर्को राज्य जोड्दै भक्तपुरको सीमा एकीकरण गरेपछि १८२६ मंसिर १ गते नेपाल राज्यको जन्म गराए ।
यो सीमालाई उनले काठमाडौं खाल्डो पूर्वतर्फ किरात प्रदेश, लिम्बुवान क्षेत्र भई भुटानको छेउछाउसम्म तन्काए । उनको देहान्त भएपछि उनका सन्ततिले नेपाल खाल्डो पश्चिमतर्फ एकीकरण गरेपछि अन्तत: विशाल नेपालको सिमाना कायम भयो । अंग्रेजलाई सुदृढ तथा एकीकृत हिमाली राज्यको सिमाना कायम भएको पचेन । परिणामत: सन् १८१४–१८१६ सम्म अंग्रेज–नेपाल सीमा युद्ध भयो । अंग्रेजी शासनको छलछामका कारण सुगौली सन्धिद्वारा सीमारेखामा कुठाराघात गरेर वर्तमान नेपालको सीमा कायम हुनपुग्यो ।
सीमा एकीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायणले विभिन्न रणनीति अख्तियार गरेका थिए ।आफ्नो सीमा जोगाइराख्न सुरक्षित किल्ला खोजी गरी सन्धिसर्पन हेरेर गढी तथा गौंडालाई तमतयार तुल्याइराख्नुपर्छ भन्ने उनको कथन थियो । उनी भन्ने गर्थे, ‘दक्षिणतर्फको समुद्रका वादशाहसित घाहा (मित्रता) राख्नु, तर त्यो अत्यन्त चतुरो छ ।’
यसै कारण मकवानपुर गढी, सिन्धुली गढी, चिसापानी गढी, जितपुर गढी, सिम्रौनगढ जस्ता प्रवेश गर्ने मुख्य–मुख्य नाकामा किल्ला बनाई निगरानी राख्नुपर्छ भन्ने उनको दिव्यविचार थियो । उनी भन्थे, ‘कथंकदाचित दक्षिणी वादशाहको सेना उत्तर बढ्दै आयो भने समथर मैदानी भागमा होइन, पहाडी प्रदेशमा ल्याएर मात्र लडाइँ गर्नुपर्छ । चुरे पहाडको घाँटीमा वैरीहरू आइपुगेपछि उनीहरूलाई सखाप पार्नेगरी काटिदिन सजिलो हुन्छ । यस्तो गर्नसके हामीलाई पाँच–सात पुस्तासम्मलाई पुग्ने खर–खजाना पनि मिल्नेछ र गङ्गा नदीसम्म हाम्रो देश (नेपाल) को साँध–सिमाना लाग्नेछ ।’
पृथ्वीनारायणको सन्देश थियो, ‘चतुरो वैरी लडाइँमा लड्न सकेन भने लोलोपोतो तथा अनेक छलकपट गरेर भए पनि हाम्रो देश नेपालको सिमानाभित्र आउने प्रयास गर्नेछ । यो नेपालको तखत भनेको एउटा प्राकृतिक किल्ला हो । यस किल्लालाई दक्षिणी वादशाहले पायो भने संसारका चारैवटा वादशाहलाई ओरालो लगाइदिनेछ । यथार्थमा यो राज्य ईश्वर (प्रकृति) आफैले रचना गरेको किल्ला हो । आफ्नो किल्लालाई मजबुत राख्न विदेशका महाजनहरूलाई पर्सा–गढीबाट उत्तरतर्फ आउन बन्देज गर्नुपर्छ ।’ यसबाट उनलाई नेपालको भूगोल तथा धरातलबारे राम्रो ज्ञान भएको बुझिन्छ ।
नेपालको सिमाना सुरक्षा गर्न र खासगरी राजधानी काठमाडौं खाल्डोलाई सुरक्षित राख्न चारैतिर दुर्ग बनाउने र यसभित्र कुनै फिरंगीलाई पस्न नदिने पृथ्वीनारायण शाहको अवधारणा थियो । यसै सिलसिलामा उनले भनेका थिए, ‘शिवपुरी, फूलचोकी, चन्द्रागिरी, महादेवपोखरी, दाप्चा, पालुङ र काहुलेमा पक्की किल्ला बनाउनुपर्छ ।
किल्लैपिच्छे लमछट गरी (लमतन्न पारी) तोपहरू राख्नुपर्छ । प्रत्येक किल्लाको ढोकामा पाँच–पाँचजना सिपाही पनि तैनाथ गर्नुपर्छ । यसो गरे चेवा–चर्चा गर्ने, भाग्ने, हराउने, ढुकुवा बस्ने, दङ्गा–फसादी गर्ने तथा खुन गर्नेहरूको पनि केही चल्ने छैन । संसारका चारै वादशाहले नेपालको सिमानामा एकैपटक चढाइँ गर्दै आए भने पनि उनीहरूको केही लाग्ने छैन ।
देशको माटो जोगाउन पृथ्वीनारायण शाहको दृढ रणनीति रहेको पाइन्छ । छिमेकी देशहरूलाई समदूरीमा राख्न सक्नुपर्छ, एउटा देशलाई नेपालको सीमातर्फ लहसिन दिनु हुँदैन, दक्षिणी बढे भने हाम्रो देशको हित हुँदैन, उनीहरूलाई उत्तरतर्फ बढ्न नदिन ठाउँ–ठाउँमा भाँजो तगारो हाल्नुपर्छ भन्ने उनको दिव्य उपदेश रहेको थियो । शत्रुमाथि जाइ नलाग्नु, तर जाइलागे शत्रुलाई हान्न नचुक्नु भन्ने रणनीति अख्तियार गरेको बुझिन्छ ।
कान्तिपुरका अन्तिम राजा जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्न कप्तान किनलकको नेतृत्वमा आएको भारतको अंग्रेजी फौज सिन्धुलीगढी उक्लँदा–नउक्लँदै १८२४ असोज १५ मा गोर्खाली फौजले अकस्मात आक्रमण गरी लघारेका थिए । सिन्धुलीमा फिरंगी आइलाग्दा पृथ्वीनारायणले मकवानपुर एकीकरण गरेर गोर्खा राज्यको सिमाना दक्षिणमा जनकपुरसम्म पुर्‍याएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र, नेपालको राष्ट्रियता बचाउन, राष्ट्रिय सीमा संरक्षण गर्न र नेपालीलाई नेपाली भएर बाँच्न पृथ्वीनारायणको दिव्य विचारले योगदान गरेको छ । उनको समयकालदेखि हालसम्म धेरै उथल–पुथल भए । जस्तो– ऐतिहासिक कालखण्डमा थापा तथा पाँडेकाल थियो भने १ सय ४ वर्ष राणा शासनकाल चलेको थियो । समयचक्रमा २००७ देखि २०१७ सालसम्म प्रजातान्त्रिक अवधि र त्यसपछि ३० वर्षे पञ्चायतीकाल गुज्रियो ।
पुन: प्रजातन्त्र प्राप्ति हुनुका साथै लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव भयो । शाहवंश अन्त्य भएर गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो । यत्तिका कालखण्ड व्यतित भइसक्दा पनि पृथ्वीनारायणको उक्ति उपदेश त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।
दक्षिणी मुख्य–मुख्य नाकामा किल्ला बनाई निगरानी राख्नुपर्छ भन्ने उनको उक्ति रणनीतिका रूपमा अवलम्बन गर्दै नेपाल–भारत सीमा नियमन गरिएको भए आज अपराधी, आतंककारीले एकातर्फ अपराध गरेर लुसुक्क अर्को देश पस्न सक्ने थिएनन् । लागुपदार्थ तथा भारतीय नक्कली नोट सीमापार गर्न गराउन सक्ने थिएनन् । मालसामान तस्करी हुन बन्द हुने थियो ।
चेलीबेटी बेचबिखन रोकिने थियो । दक्षिणको सेना उत्तर बढ्दैआउँदा रोक्नसकेको भए कालापानी, सुुस्ताजस्ता नेपालको सीमान्त भूमि अतिक्रमण हुने थिएन ।
‘दक्षिणतर्फको मित्र चतुर छ, उत्तरको मित्र पनि कम छैन । यो राजे दुई ढुंगाको तरुलजस्तो रहेछ, त्यसैले दुवैसँग घाहा (मित्रता) राख्नु’ भन्ने पृथ्वीनारायणको भनाइ बिर्संदा नेपालको सार्वभौमिकता रहेको लिपुलेकबाट व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता भारत र चीनले नेपाललाई थाहै नदिई २०१५ मे १५ मा गरे । पृथ्वीनारायणको विचार अवलम्बन नगरी भारत र चीनलाई नेपालले समसामिप्यमा राख्न नसकेका कारण भौगोलिक अखण्डतामा आँच आएको मान्न सकिन्छ ।
हाम्रा गणतान्त्रिक राजनीतिक नेताहरू पृथ्वीनारायण शाहको विचार उल्लेख गर्न विस्तारै हिचकिचाउन छाडेका छन् । पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा २०७३ पुस २६ गते भरतपुर नगरपालिकाको तेस्रो परिषद् उद्घाटन क्रममा भनेका थिए, ‘छिमेकी भारतमा अंग्रेजले साना–साना भुरेटाकुरे राज्यलाई निल्दै विशाल साम्राज्य खडा गरेको स्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरी बलियो र शक्तिशाली नबनाएको भए नेपालको अस्तित्व नरहने खतरा थियो ।
उनको भूमिकालाई नकार्ने भन्ने प्रश्नै छैन । साना भुरेटाकुरे राज्यका कारण सिङ्गै देश र जनता आपत्मा परेका बेला पृथ्वीनारायणले एकीकरणको कदम चालेका थिए ।’ बाबुराम भट्टराईलेदेशले ‘नयाँ नेता’ खोजिरहेको उल्लेख गर्दै गौतम बुद्ध, पृथ्वीनारायण शाह र केही हदसम्म बीपी कोइरालामा नेतृत्व क्षमता देखिएको २०६९ माघ २४ मा व्यक्त गरेका थिए ।
सीमा एकीकरणवादी पृथ्वीनारायण शाहको विचार, उक्ति, उपदेश, धारणा, भनाइ र दिव्यदृष्टि नेपाली राष्ट्रवादको जग हो । नेपाल राष्ट्रको आत्मा हो । अहिले पनि उनको वैचारिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्‍यौं भने राष्ट्रियता अक्षुण्ण राख्न सक्छौं । नेपाललाई कसरी अखण्ड राख्नुपर्छ र हाम्रो स्वाधीनता एवं स्वतन्त्रतालाई कसरी बचाइराख्नुपर्छ भन्ने विषयमा नीति निर्माताले पृथ्वीनारायणको दिव्य विचारलाई ख्याल गनुपर्छ ।
प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०८:०१